EVY's Kitchen: Cheesy Prawns
ပုဇွန် ကို Cheese/ Thousand island နဲ့ကင်ထားတာပါ။ ဒါမျိုးကို အပြင်ဆိုင်မှာ စားဖူးလို့ လုပ်စားချင်နေတာကြာလှပါပြီ။ ခုမှတကယ်လုပ်ဖြစ်သွားတာ။ အအီစာ ကြိုက်တဲ့ လူတွေအတွက်တော့ အတော်ပါပဲ။ နဲနဲတော့ အီတယ် ၊ဒါပေမယ့်စားလို့တော့ တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ၀ိတ်တက်မှာလားတော့ မမေးနဲ့နော်။ အသေအချာပါပဲ။ ပြီးရင်လေ့ကျင့်ခန်းပိုလုပ်လိုက်ပေါ့။
ပုဇွန် လေးတွေကိုရေဆေး ၊ပြီးရင် ကျောခွဲပြီး အစာလမ်းကြောင်းထုတ်၊ ပြန့်ပြန့်လေးဖြစ်သွားအောင် ဖိချလိုက်ပါ
Cheese နဲနဲ နဲ့ Thousand Island ကိုပြန့်သွားတဲ့နေရာလေးပေါ်တင်
၂၀၀ ဒီဂရီမှာ ၅ မိနစ် ကနေ ၇ မိနစ် (ဒါမှမဟုတ် cheese တွေပျော်သွားတဲ့ အထိ) ကင်ပေးပါ
I've been wanted to try this out quite sometimes ago after having it at Sakura. I just love its cheesy and rich flavor. However, it has no chance to appear on my bake list as I was too busy baking other stuff. Finally, I managed to make them successfully today. Pretty easy to make though.
Rise well the prawns
Withasharp knife, makeaslit in the center
Clean the prawn and press two fleshes to the side and making the space for dressing.
Spread thousand island dressing and some cheese powder
Bake in 200 degree C preheated oven for7mins and that's ready.
Posted by Evy at 9:11 PM
Labels: Baking, Fish, seafood, သရေစာ
အဟင့် အဟင့် မမရယ်
ဘာလို့ ဒီလောက်တော်နေတာလဲဟင် မမ
ရုံတောင် မမနဲ့ အိမ်ချင်းနီးချင်ပြီတိလား
ဟီ ဟိ စကားမစပ် မွေးနေ့ က ၉ လ ၁၂ရက်
စားချင်စရာလေး.. တစ်ခါမှ cheese နဲကိုသိပ်ပြီး ကင်တာ မစားဖူးသေးဘူး...
Thousand Island so tar bar ko khaw tar lae ? thanks
Hi Jess, yup they are very cheesy. I love it.
Anonymous - Thousand Island Dressing ပုံကိုတင်လိုက်ပြီနော်